ဟွာဝေး ME906C ME906E ME906J ME906V NGFF 4G LTE ကိုကတ်၏ကွဲပြားခြားနားသောဘာတွေလဲ?? | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
နိုဝင်ဘာလ 23, 2015 admin ရဲ့ 3က G & ကြိုးမဲ့ကဒ်ကို, အခြား, နည်းပညာ 0
ME906 isamobile Internet access module. The module supports LTE, WCDMA, EVDO, and GSM. The product uses the M.2 interface, supports Windows7နဲ့ Windows 8.1, and is intended for laptop and tablet OEM.
Size 42 x က 30 x 2.3mm
1x က: UL (153.6 kbps) / DL (153.6 kbps)
ယူအက်စ်ဘီ 2.0 interface high speed
သိုလှောင်ခြင်း: -40°C to +85°C
A professional supplier that was integrated all brands and models wireless in OS ကို-STORE.
HTC က ဥပဒေရေးရာအနက် စီပီယူ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ပရိုဆက်ဆာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Samsung က processor ​​ကို Software များ device ကိုမော်ဒယ် Intel က မိုဘိုင်းဖုန်း နည်းပညာ 64-နည်းနည်းက Windows OS ကို-STORE စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Nokia က HD Graphics ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Technology_Internet
Qualcomm မှ ဥပဒေရေးရာအနက် Nokia က 64-နည်းနည်းက Windows ပရိုဆက်ဆာ မိုဘိုင်းဖုန်း ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု device ကိုမော်ဒယ် Technology_Internet Intel က OS ကို-STORE ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Sony Ericsson က Samsung က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ HD Graphics HTC က နည်းပညာ Intel က Server ကို Software များ processor ​​ကို စီပီယူ စမတ်ဖုန်းများ Samsung ရဲ့ Galaxy စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု